Posted: March 25, 2009 in အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း	Tags: မာတိကာ, ဟိုမုန်းများ, အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း, ရောဂါ	13
ုkom says:	March 25, 2009 at 6:31 pm	appreciated.
Dr.lwanwai says:	March 25, 2009 at 7:02 pm	အစ်မကွန် ကျေးဇူး။
ဖိုးစိန် says:	March 25, 2009 at 6:43 pm	အကိုရေ…ကျနော်လဲ ညအိပ်တိုင်းရေအရမ်းငတ်တယ်..
Dr.lwanwai says:	March 25, 2009 at 7:05 pm	ရောဂါ လက္ခဏာနဲ့ ဆိုင်တဲ့ အပိုင်းကျရင် လာဖတ်ဦးပေါ့ညီ။ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ မစိုးရိမ်ပါနဲ့။
မိုးချိုသင်း says:	March 25, 2009 at 6:43 pm	ဖတ်သွားပြီ ကိုလွဏ်းဝေ။
Dr.lwanwai says:	March 25, 2009 at 7:07 pm	မချိုသင်းရေ… စတမ်းဆဲလ်ကြီးအောင်မြင်ရင် ပျောက်အောင်ကုနိုင်မယ်ဗျ… ကျနော်လည်း နိုင်တဲ့ဘက်က ၀င်ကူတဲ့သဘောပါပဲ။ ဆီးချိုက အဖြစ်များလာတော့မဲ့ သဘောရှိတာကိုးဗျာ…လာလာဖတ်ပေးတာ ကျေးဇူးပါ။
မိုးချိုသင်း says:	March 25, 2009 at 6:46 pm	ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ ရဲ့ ညီ မဟုတ်ဘူးကိုး။ အရင်ပို့စ်က ကွန်မန့်ပြန်ဖတ်မှ စာပြန်ထားတာ သိရတယ်။ ဆောရီးပါ ဆရာ။
ဖိုးစိန် says:	March 25, 2009 at 7:13 pm	ဟုတ်အကို ကျနော်စိတ်ဝင်စားပါတယ်..ဗဟုသုတလဲရပါတယ်..လာဖတ်နေအုံးမှာပါ အကို
Dr.lwanwai says:	March 25, 2009 at 7:46 pm	ဆီးချိုကြောင့်ဖြစ်တာမျိုးက ဆီးအလွန်သွားတယ်။ ခဏခဏလည်းသွားတယ်။ မသွားဘဲလည်း မနေနိုင်ဘူး။ အကြိမ်ရေကော ဆီးပမာဏကော များတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ရေငတ်တတ်တယ်။ ရေထပ်ထပ်သောက်ရတယ်။ ရေသောက်တော့ ဆီးထပ်သွားတယ်။ ဒါမျိုးပါ။
Dream says:	March 26, 2009 at 4:38 am	မှတ်သားစရာတွေပါ… အရင်က မက်မက်အမေလည်း အဲလိုပဲ… ညဖက် အိပ်လို့ မရဘူး.. ခဏခဏ နိုးတယ်.. ရေလဲ ငတ်တယ်… အပေါ့လည်း ခဏခဏသွားတယ်.. နောက်ပိုင်း လူက တဖြည်း ဖြည်း ပိန်ကျလာတယ်လေ… အဲဒါနဲ့ ဆရာဝန်ပြ.. ဆီးစစ် သွေးစစ်တော့ ဆီးချိုရောဂါ ရှိနေတာတဲ့…. အခုတော့ သူက ဆေးတွေ သောက်နေရတယ်လေ…. မေမေလည်း အခုမှ ဆေးနဲ့ တွေ့လို့လား မသိပါဘူး .. ပြန်ဝလာတယ်….. ဆီးချိုရောဂါကို ပျောက်အောင် လုပ်လို့ မရသေးဘူးလား ဦးရီးတော်…. နောက်ပိုင်း သူက မျိုးရိုးလိုက်တယ်ဆိုတာ ဟုတ်လား… 😦
Dr.lwanwai says:	March 26, 2009 at 11:27 am	အမျိုးအစားနှစ်မျိုးလုံးက အနည်းနဲ့အများ မျိုးရိုးလိုက်နိုင်တယ်။ ဆီးချို ၁ အတွက်ကိုတော့ ပျောက်အောင် ကုသလို့မရသေးဘူး။ အခု ဆီးချို ၂ နဲ့ပတ်သက်လို့ နည်းနည်းဖတ်ရတာက အ၀လွန်တဲ့ လူတွေမှာ အစာအိမ်ကိုချုံ့ပစ်တဲ့ ခွဲစိတ်မှု Gastric bypass procedures (GBP) ဟာ ဆီးချို ၂ ကို ပျောက်ကင်းသလောက်နီးပါး တတ်နိုင်ပြီး တော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့ဆိုတယ်။
၀ါဝါခိုင်မင်း says:	March 26, 2009 at 5:33 am	လာဖတ်သွားတယ်..🙂
အစ်မအလွန်စားချင်သော ရွှေပုဇွန်မလိုင်မုန့်လက်ဆောင်ရလာပြီလေ..အစ်မက အချိုအရမ်းကြိုက်တော့ စားလိုက်ဦးမယ်..😛 လေးစားပါတယ် ဆရာ.. ဆက်လုပ်…
flowerpoem says:	March 28, 2009 at 10:35 am	ဆီးချိုရောဂါအကြောင်းကို လာဖတ်သွားပါတယ်ရှင်. ဗဟုသုတရလို့ကျေးဇူးပါ.
ဆီးချိုရောဂါ မိတ်ဆက်	ဆီးချိုအမျိုးအစား-၁	Follow Blog via Email